China Universal PU Foam Manual အမျိုးအစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Universal PU Foam Manual အမျိုးအစား
Universal PU Foam Manual အမျိုးအစား
Universal PU Foam Manual Type A22 သည် polyurethane foam သုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေမြှုပ်လျှောက်လွှာကောက်ရိုးနှင့်သုံးရန်အဆင်ပြေအောင် ဦး ခေါင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အမြှုပ်သည်ချဲ့ပြီးလေထဲတွင်အစိုဓာတ်ဖြင့်ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။ ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် PU FOAM A22 လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစားသည်အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး၎င်းကို၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် ၀ ယ်သူများစွာကိုအနိုင်ရရန်ကူညီသည်။ ကွက်လပ်များ၊ အဆစ်များ၊ အပေါက်များနှင့်အပေါက်များကိုဖြည့်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း
၁။ UNIVERSAL PU FOAM MANUAL TYPE ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး
â— UPVC၊ ပန်းရန်၊ အုတ်၊ လုပ်ငန်း၊ မှန်၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယံ၊ သစ်နှင့်အခြားအလွှာများ (PP, PE နှင့် Teflon မှလွဲ၍) အားလုံးသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သည်။
application အကောင်းဆုံးအသုံးချအပူချိန်မှာ +၁၈â„ မှ +၃၀â„ ƒဖြစ်သည်။
It- ၎င်းတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေသော CFC ကင်းစင်သော propellants များပါ ၀ င်သည်။
၂။ UNIVERSAL PU FOAM MANUAL အမျိုးအစား
ခြောက်သွေ့သောအချိန် ၁၅-၁၈ မိနစ်အကြာတွင်ဖုန်ကင်းစင်သည်။
ဖြတ်တောက်ချိန် (မိနစ်) ၇၀ ~ ၈၀
အထွက်နှုန်း (L) 29
တိကျသောဆွဲငင်အား (kg/m³) 15
ချုံ့အား (kPa) 106
တင်းအား (kPa) 140
ကော်အား (kPa) 95
ရေစုပ်ယူမှု (ML) ၀.၅ ~ ၂ (အပေါ်ယံလွှာမရှိပါ)
3. နိုင်ငံတကာ PU ခြေရာခံလက်စွဲအမျိုးအစားများ၏အသုံးချမှုများ
â— ထုပ်ပိုးရန်ရည်ရွယ်ချက်၊ အဖိုးတန် & amp; ထုပ်ပိုးပါ။ ပျက်စီးလွယ်သောကုန်ပစ္စည်း၊ တုန်ခါမှုနှင့်ဖိအားကိုဆန့်ကျင်သည်။
၄။ UNIVERSAL PU FOAM MANUAL TYPE ၏အသုံးချနည်းလမ်းညွှန်ချက်များ
၅။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ PU ခြေရာခံလက်စွဲအမျိုးအစား
6. ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် UNIVERSAL PU FOAM လက်စွဲအမျိုးအစား
မေး - PU အမြှုပ်သည်ဆေးကြောပြီးနောက်ကျုံ့သွားလျှင်၎င်းသည်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။
A: ၎င်းသည်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုပျက်စီးစေပြီး PU မြှုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ကျစေလိမ့်မည်။
မေး: elasticity ကောင်းကောင်းနှင့် PU PU ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သလဲ။
A: ပျော့ပျောင်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်သော PU အမြှုပ်သည်ပူပြင်းသောရာသီဥတု၌တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုမပျက်စီးစေသောကြောင့်၊ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
hot Tags:: Universal PU Foam Manual အမျိုးအစား၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်၊ စက်ရုံ၊ စျေး၊ စာရင်း၊
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် PU အမြှုပ်PU ရေပူရောင်းသည်PU အမြှုပ်ကိုချည်နှောင်သည်B3 PU အမြှုပ်